Inkinga ngephupho lomholi we-IFP kulezi zinsuku | Bayede News
Home/ Ipolitiki/Inkinga ngephupho lomholi we-IFP kulezi zinsuku
Inkinga ngephupho lomholi we-IFP kulezi zinsuku
nguMNU uNTOBEKO SHOZI
Umholi we-IFP uMntwana uMangosuthu Buthelezi utshele elinye lamaphephandaba esilungu emasontweni amabili edlule ukuthi usamile ephupheni lakhe leNingizimu Afrika enezifunda ezizimele ngokoMthethosisekelo nokuvikelwa kwawo, iSishayamthetho kanye noHulumeni. Lo mholi waqala ukuveza leli phupho lakhe ngaphambi kokhetho lowe-1994 lapho okwaze kwaba khona nokwesaba ukuthi ukhetho lukazwelonke ngeke lube khona. Emva kwalo lolu khetho lapho inhlangano i-IFP inqobe iKwaZulu-Natal waphinde wagcizelela lo mholi ephupheni lakhe leNingizimu Afrika enezifunda ezingakhosele kuHulumeni kazwelonke. Leli phupho lagcina lingaphumelelanga njengoba i-ANC kwakuyiyona enamandla okuguqula uMthethosisekelo ukuthi uvune leli phupho. Lo mholi ekhuluma nephephandaba lesilungu ufanise elakuleli nohlobo oluthize lwesaladi lwezithelo. Ubeke wathi yize leli saladi linganikwa igama elilodwa eliziba ukuhlukahlukana kwezithelo kodwa akusho ukuthi iklabishi okanye ukhukhumba uyinto eyodwa notamatisi, kungukuthi babekwe endaweni eyodwa kanti kubonakala kukuhle uma kundawonye. Uthe uyayihlonipha imizamo ka-Archbishop uDesmond Tutu owasifanisa nothingo lwenkosazane kodwa wathi mhlasimpe sesisesikhathini lapho kumele sibheke khona ukuthi kunganjani siqale sibheke ukuthi ukuhlukana kwethu kungasibekaphi njengezwe uma singakuhlonipha.
Kulula ukugxeka lo mbono walo mholi ikakhulukazi uma kuzokhunjulwa isexwayiso sikaDkt uNelson Mandela owathi sibahle sihlangene ukunoma sihlukene. Ukushintsha indlu yombuso manje kungabe kungukukhwifela ngamathe umlando waleli qhawe lomzabalazo nokulahla isithombe iNingizimu Afrika esizakhele sona emazweni omhlaba. Kuzonakeka ukuthi abaningi kuleli lizwe banombono wokuthi uMthethosisekelo ucheme nabamhlophe. AboHlanga kanye namaqembu anjengo-EFF muva nje ne-ANC banombono wokuthi uMthethosisekelo wakuleli ucheme nabamhlophe kwelokwabiwa komhlaba, okungasho ukubuyiselwa komhlaba kubantu ngaphandle kwesinxephezelo kuwudaba olusematheni kulezi zinsuku. Abanye basola uMthethosisekelo ngokuchema nesimilo sabaMhlophe ikakhulukazi uma kuziwa ezintweni ezinjengamasiko esintu. Ukuthwala kuyicala ngokoMthethosisekelo kodwa kuyisiko lesintu. Sekukaningi sibona abasenza leli siko bekhalelwa amasongo kasiGonyela, kanti abamasiko bayakhala bathi loMthethosisekelo ovikelwayo uvuna isimilo sabamhlophe ufaka ehlazweni aboHlanga. Ngaleyo ndlela kulula ukucabanga umthethosisekelo wezifunda uba usizo ngempela kubantu njengoba uyobe uhambisana nezimilo zaleso sifunda. INingizimu Afrika inezinhlanga ezingaphezu kwe-11, ngakhoke kunzima ukucabanga uMthethosisekelo ongagculisa zonke lezi zinhlanga ngokwehlukahlukana kwazo, okungakho iphupho lomholi we-IFP lingahle libe yisisombululo.
Kodwa inkinga ngaleli phupho umlando ongasho lutho oluhle ngalo. UMntwana uButhelezi unomlando oyindida kwayena wokuzama ukuhlukanisa isizwe esimnyama. Empini yangowezi-1994 neyangowezi-1996 umlando uyilahla ngecala iNkosi lokuhlukanisa isizwe saKwa-Zulu lapho kubulalana khona amalungu e-ANC ne-IFP. Nangabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi uMntwana ungumpehli wodweshu kodwa kuseyiyona yodwa indlela esiwazi ngayo umlando. Ngaleyo ndlela kunzima ukumcabanga lomholi ngempela ecabangela abantu ngaphandle kokuthi mhlasimpe usenethemba lokuthi inhlangano yakhe isangayibusa iKwaZulu Natal ngaleyo ndlela abe semandleni okuhola isifundazwe esingesesibili esicebile eNingizimu Afrika.
Ukusuka emlandweni ongadala impikiswano walo mholi kwazise konke esikwaziyo ngomlando sikwazi ngezimbangi i-ANC kanye nababesesigungwini esiphezulu kuNP yabamhlophe, kwazise amazwi ezinhlangano ezinjengoPAC, i-UDF, iBlack Consciousness Movement awashaywa ndiva emlandweni wakuleli. Kodwa inkinga enkulu ngephupho lomholi we-IFP indlela elafezekiswa ngayo ngowe-1961 ngesikhathi kungena emandleni uMnu uHendrik Verwoerd. Osomlando basola lo Mengameli ngokwehlukanisa iNingizimu Afrika ibe kulesi simo sokuhlukana njengamanje. Lo Mengameli wahlukanisa zonke izinhlanga wathi azihlale endaweni yazo zodwa. Kulokho kwehlukana wayethi bayozithuthukisa kangcono abantu abanomcabango ofanayo kunokuthi bexubane nabezinye izinhlanga. Lokhu kucwasana nokuhlukumezana phakathi kwezinhlanga ezimnyama kwasuka emva kwalolu hlelo olwaphendula izitha ezinhlangeni ezazingezona phambilini. Isazwakala iminjunju yalo mlando walolu hlelo namanje. Yize umholi we-IFP engasho ukuthi izinhlanga zingaxubani kodwa kunzima ukuthi abantu babone umehluko phakathi kwalokhu akushoyo nokwavezwa umlando. Umlando awumuvuni umholi we-IFP ephupheni lakhe leNingizimu Afrika enezifunda ezizimele kuHulumeni kazwelonke, okungase kumfake ebhadini lokufaniswa noVerwoerd yize kusobala ukuthi laba banezinhloso ezehlukene ngeNingizimu Afrika. Kunzima ukucabanga ukuhlukanisa izifunda ngaphandle kokuhlukanisa abantu njengoba uveza umlando.
Ngaphezu komlando ongamvuni lo mholi, umnotho nobukhulu beNingizimu Afrika buyamphika. Okunakekayo ngamazwe analolu hlelo lombuso ukuthi kusuke kuyilawo adla izambane likapondo noma ilawo asuke emakhulu kakhulu ngokomhlaba. Amazwe anjengo-India, iNigeria, iSomalia, i-USA, iBrazil amazwe amakhulu kakhulu ngokomhlaba okungakho abona kungcono ukusabalalisa amandla ombuso kuzona zonke izifunda. IGermany yizwe elidla izambane likapondo kanti lona lahlukanisa izifunda ngoba labona ukuthi akukuhle ukuthi imali eningi ihlale endaweni eyodwa ngoba ingase isetshenziswe ngokungalingani. Izwe iNingizimu Afrika ecishe ilingane nalo ngokomnotho uma kubalwa ngokobuningi babantu iMexico. Leli lizwe liyisibonelo esingesihle ekuhlukaniseni izifunda njengoba khona uthola lezo ezicebekakhulu nezintula kakhulu, kanti ukusebenza kukaHulumeni kulelizwe kuyinto esiphenduke inhlekisa ngisho nakubahlali bayo njengoba lihlaselwe izigilamkhuba zezidakamizwa. Akukho okumvunayo umholi we IFP ephupheni lakhe leNingizimu Afrika. Kungaletha uvalo nokwesaba kubantu ukuzwa izinguquko ezivuna ukuhlukana kwezifunda esikhathini esinjengalesi lapho izinhlanga zibukana khona ngeziqu zamehlo ikakhulukazi aboHlanga nabaMhlophe. Kubonakala sengathi ukuphumelela kwaleli phupho kungavusa ukungezwani phakathi kwezinhlanga ezimnyama okuyinto enezigameko ezibaliwe esikhathini sanamhlanje. Yize leli phupho lingafika nezisombululo kwezinye izinkinga lelizwe elibhekene nazo, kodwa kubonakala sengathi lizobuyisela izwe lapho lingafisi ukubuyela khona noma kuyobe kungeyona inhloso yalo mholi.
UMnu uNtobeko Shozi ongumfundi wezePolitiki e-UKZN.
2 thoughts on “Inkinga ngephupho lomholi we-IFP kulezi zinsuku”
Fika Shelembe says:
Iqiniso lilonke owaKwaShenge kwakumfanele ukuthola ithuba lokuba wumongameli wezwe,okuningi akakushoyo kuyinto ekhona neyenzekayo.kanti uthi umqondo wakhe unombono wezwe elinempilo engenabi ububha,enemfundo,nenkolelo ethi akusetshenzwe kunokulindela ukukhangezwa Hulumeni,
Ukulungisa iphutha umqondo wakhe uphusile,hhayi ngoba kusho yena umbono wami